Wararka - Suuqa Gawaarida Asynchronous si kor loogu qaado dakhliga aragtida wanaagsan
Noocii ugu dambeeyay ee daraasadda suuqa 2020 ee Suuqa Asynchronous Motor oo ka kooban 103 oo ay kujiraan miisaska xogta suuqa, jaantusyada, jaantusyada, iyo jaantusyada kuwaas oo si fudud loo fahmi karo iyadoo lagu soo bandhigay falanqeyn qoto dheer.
Cudurka Coronavirus Pandemic (COVID-19) wuxuu saameeyey dhinac kasta oo nolosha adduunka ah. Tani waxay horseeday isbeddelo dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha suuqa. Warbixinta ayaa kahadlaysa xaalada suuqa ee sida dhaqsaha isu badalaysa iyo bilowga iyo qiimaynta saamaynta mustaqbalka.
Mashiinka asynchronous, oo sidoo kale loo yaqaan 'motor induction motor', waa matoor hadda socda. Qalabka stator wuxuu adeegsadaa soo-saarista elektromagnetic-ka si uu u dhaliyo rotor-ka hadda jira, mootaduna waxay soo saartaa isjiidjiid, sidaa darteed looma baahna magnet joogto ah. Matoorrada Asynchronous waxaa loo qaybin karaa baqashada duufaan iyo baqashada baqshiish qaab rotorings windings. Nooca hareeraha waa matoor seddex waji ah, nooca baqashada dabagaleyda ah wuxuu leeyahay matoor seddex waji ah iyo matoor hal waji ah. Mashiinka mootada induction ee qafis squirrel ah wuxuu ku xirnaan karaa wareegga bannaanka ee mootada.
Sida ku xusan cilmi baarista iyo daraasadda, suuqa ayaa dejiyay joogitaankiisa adduunka oo dhan. Daraasada Cilmibaarista Suuqa Gawaarida ee Asynchronous waxay bixisaa qiimeyn dhameystiran ee Suuqa waxayna ka kooban tahay isbeddel mustaqbalka ah, arrimaha kobaca hadda jira, fikradaha diirada lasaaray, faahfaahinta, iyo xogta suuqa ee la xaqiijiyay ee warshadaha.
Ciyaartoyda Suuqa Caalamiga ah, ee soo bixi doona oo ku guuleysan doona 2020 Suuqa Asynchronous Motor
Jaleecaya ilaa 2020, suuqa adduunka ayaa lafilayaa inuu sanad muhiim ah u ahaado Suuqa Gawaarida Asynchronous marka loo eego koritaanka iyo dakhliga.
Ku dhowaad dhammaan shirkadaha ku taxan ama la sifeeyay waxaa loo cusbooneysiinayaa codsiyadooda waayo-aragnimada dhammaadka isticmaalaha iyo sameynta saldhigooda joogtada ah sannadka 2020. Warbixintan waxay diiradda saartay oo xoogga saartay shirkadahaas oo ay ka mid yihiin Bosch Rexroth, SIEMENS, TATUNG, Emerson, SHANDONG HUALI, ABB , STOEBER, GEORGII KOBOLD, SERVAX, TECO, Wolong, HITACHI, Bonda Industry, Dazhong, ANHUI WANNAN, YASKAWA, JLEM, Jiangte, JJE, SchabmÃ¼ller, AMK, HEIDENHAIN, XEMG, SPG, Ydmot, -Beloit, ABM Greiffenberger.
Intaas waxaa sii dheer, cilmi-baaristu waxay gacan ka geysaneysaa aragti qoto-dheer oo ku saabsan kala-go'idda heerka heer gobol oo loo qoondeeyey inay u badan tahay inay horseedayso xaddiga kobaca dhulka, waddamada leh suuqa ugu sarreeya suuqyada xilliyadii hore iyo kuwa hadda jira. Qaar ka mid ah juqraafi ahaan kala-goynta daraasadda waa Waqooyiga Ameerika (oo lagu daboolay Cutubka 7 iyo 14), Mareykanka, Kanada, Mexico, Yurub (oo lagu daboolay Cutubka 8 iyo 14), Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Isbaanish, Ruushka.
Iyadoo la saadaalinayo Suuqa Asynchronous Motor si loo ballaariyo CAGR% sanadka 2020 iyo iyadoo XXXX loo maleynayo inay tahay ka faa'iideyste weyn, way ka wanaagsan tahay halka ZZZZ ee 2020.
Qulqulka qaybaha ganacsiga cusub wuxuu noqonayaa mid garaacaya sanadka 2020 ee Suuqa Gawaarida Asynchronous
Sida laga soo xigtay daraasadda suuqa AMR, Isbedelada ugu dambeeyay ee doorbidyada macaamiisha qaybaha suuqyada sida nooca, dalabku wuxuu noqon doonaa mid aad u dhib badan. Iibinta qaybta gawaarida Asynchronous waxay jabin doontaa calaamadda $ $ ee 2020.
Si ka duwan qaybaha loo qoondeeyey ee ku guuleystey warshadaha sida Nooca (Saddex-waji Asynchronous Motor, Single-phase Asynchronous Motor) iyo Adeegsadayaasha Dhamaystiran / Codsiga (Qalabka Mashiinka, Duubista Yar, Qalabka, Bambooyin, Mashiinnada Iftiinka, Mashiinka, Macdanta, Kuwa kale).
Nooca 2020 ee daraasadda suuqyada gawaarida Asynchronous ayaa ah mid sii kala jaban / cidhiidhsan si loo muujiyo qalloocii ugu dambeeyay ee soo baxa ee warshadaha.
Akhlaaqda macaamiisha iyo doorbidida beddelaadda, Sidee ayay shirkadaha gawaarida Asynchronous u qirayaan?
Sababtoo ah isbeddelka doorbidyada macaamiisha iyada oo dib-u-eegis lagu sameynayo iibkii ugu dambeeyay iyo soo gudbinta warbixinnada dakhliga, iibiyeyaasha waaweyn ee suuqyada Caalamiga ah ayaa isku dayaya inay soo jiitaan dareenka isticmaalayaasha ugu dambeeya ama macaamiisha "Bixinta iyo adeegyada dheeriga ah".
Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo falanqaynta dhinaca dalabka, Ciyaartoyda muhiimka ah waxay ku dhexjiraan habdhaqanka macaamiisha iyo doorbidooda beddelaya.
Mar labaad, shirkadaha maalgashiga waaweyn ama kuwa waa weyn ayaa diyaar u ah inay lacag badan geliyaan si ay u helaan waxqabadka ciyaaryahanka muhiimka ah ee suuqa codsiyada ama alaabooyinka cusub.
Ujeeddooyinka Cilmi-baarista iyo Ujeeddada
Si loo weyddiiyo loona baaro cabirka suuqa Asynchronous-ka ee gobollada / waddammada muhiimka ah, nooca wax soo saarka iyo dalabka, xogtii hore ee 2014 ilaa 2018, iyo qiyaas ama saadaalin 2026.
Si aad u ogaatid qaab dhismeedka Suuqa Asynchronous adoo aqoonsanaya dhowr qaybood oo ka tirsan.
In diirada la saaro ciyaartoyda muhiimka ah ee Asynchronous Motor, si loo go'aamiyo, loo sharaxo loona falanqeeyo qiimaha, saamiga suuqa, muuqaalka tartanka suuqa, Falanqaynta SWOT, iyo qorshooyinka horumarinta sanadaha soo socda.
Si loo fasiro suuqa Gawaarida Asynchronous ee ku saabsan isbeddellada koritaanka gaarka ah, rajada, iyo ku biirintooda guud ee suuqa.
In lala wadaago macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah ee saameynaya koritaanka suuqa (kartida koritaanka, fursadaha, darawallada, caqabadaha u gaarka ah warshadaha iyo halista).
In la qorsheeyo cabirka Suuqa Gawaarida Asynchronous, ee ku saabsan gobollada muhiimka ah, nooca, iyo codsiyada.
Si loo sharaxo horumarka tartamada sida balaadhinta, heshiisyada, soosaarka alaabada cusub iyo wax soo iibsiga suuqa iyo waxyaabo kaloo badan.
Falanqaynta Saameynta COVID-19 ee Suuqa Gawaarida Asynchronous
Waad ku mahadsantahay akhrinta maqaalkan, waxaad sidoo kale heli kartaa cutubka shakhsiga ah ee qaybta caqliga ama noocyada warbixinnada caqliga leh sida Waqooyiga Ameerika, Galbeedka / Bariga Yurub ama Koonfur-bari Aasiya.
Xogta suuqa la siiyay, Cilmi-baarista Suuqyada Caalamiga ah waxay bixisaa habeyn lagu saleeyo baahiyo gaar ah. U qor AMR